भन्नुपर्ने कुरा भनिहाल! - Blogs of Sagar Prasai
भन्नुपर्ने कुरा भनिहाल!
कक्षा ११ मा पढ्दा हाम्रो क्लासमा एकजना साथी थिए- कुशल। कुशल सुरूसुरूमा केटाहरूसँग त्यति बोल्दैन थिए र केटीहरूसँग नै बढि मिल्थे। हामी चाहि 'टिपिकल' टाईपका केटाहरू थियौँ। कोहि केटीसँग मिल्यो भने जिस्काईहाल्ने। कुशललाई पनि हामी खुब जिस्काउँथ्यौँ। उसको अगाडी केहि नभने पनि उ नहुदा उसको जोक बनाएर हाँस्ने गर्थ्यौँ र यस्तो गर्नेमा सबभन्दा अगाडी म नै हुन्थे।
यसरी नै कक्षा ११ सकियो। पछि कक्षा १२ को बिच तिर एकदिन म यसै स्कुलको हलमा बसिरहेको बेला, एकजना महिलाले मलाई बोलाएर भन्नुभयो- तिम्रो नाम सागर हैन?
मैले अचम्म मान्दै हो भने।
अनि वहाँले भन्नुभयो-"म कुशलको ममि हो।"
मैले हत्तपत्त वहाँलाई नमस्ते गरे।
वहाँले नमस्कार फर्काउँदै भन्नुभयो-"कुशलले तिम्रो कुरा गरिरहन्छ बाबु। हाम्रो क्लासमा सागर छ, व्हिलचियरमा हिड्छ, राम्रो पढ्छ, रमाईलो छ, क्यारिकेचर गर्छ, सबलाई हसाउँछ भनेर। त्यहि भएर तिमीलाई चिने।"
वहाँको यस्तो कुरा सुनेर, म छक्क परे। त्यो दिन वहाँसँग बिदा भएपछी- मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो। म चाहि कुशललाई यस्तो उडाउँछु, नराम्रो भन्छु, तर उ चाहि घरमा गएर पनि मेरो बारेमा त्यस्तो राम्रो कुरा गर्दो रहेछ भनेर। त्यसपछि सोचेँ- अब कुशल सँग मजाले कुरा गर्छु। उससँग माफी माग्छु, अनि मिल्छु।
तर सबै कुरा सोचे जस्तो सजिलो हुदैन रहेछ। कुशलको अगाडी पर्दा मलाई एकदम अफ्ट्यारो लाग्थ्यो। भोलि भन्छु भनेर सधै टार्थे। तर कहिले भनिन।
यसरी १२ कक्षा पनि सकियो। अनि बोर्ड एक्जाम सकिएपछि त झन् सबै आफ्नो आफ्नो बाटो लागियो। कुशललाई मैले मनमा लागेको कुरा कहिले भन्न सकिन।
अलि पछि मैले कुशल नेपालगन्ज तिर मेडिकल पढ्न गयो रे भन्ने सुनेँ। खूशी लाग्यो- एकजना असल मान्छे, डाक्टर हुनेभयो भनेर। मनमनै नराम्रो पनि लाग्यो- उ सँग कहिले माफ माग्न सकिन भनेर। तर फेरी सोचे- एक न एकदिन त कसो नभनुँला।
त्यसको केहि समय पछि मैले साथीहरूबाट एउटा एकदमै दुखद खबर सुने। पौडी खेल्ने क्रममा डुवेर कुशलको मृत्यू भएछ। मलाई त्यो बेला सार्है नराम्रो लाग्यो। एक त आफ्नो सँगै पढेको साथीको मृत्यू भयो अनि अर्को मैले कहिले पनि उसँग माफ माग्न सकिन। मनको कुरा धुलो भनेर मनमै टाँसिरहने भयो सधैको लागि।
त्यसपछि मैले आफूलाई एकदमै परिवर्तन गरे। आजकल म कसैको कुनै कुरा मनपर्यो भने, उसको अगाडी नै राम्रो लाग्यो भनिहाल्छु। कसैको स्वर मनपर्यो, कसैले राम्रो कविता लेख्यो, कसैले राम्रो फोटो खिच्यो वा कोहि असाध्यै राम्रो लाग्यो भने- म उसलाई राम्रो छ है भन्ने गर्छु। कोहि मान्छेले गरेर मेरो जिन्दगीमा प्रभाव परेको छ वा खूशी आएको छ भने, म त्यो पनि भन्ने गर्छु। र मैले गरेर कसैको मन दुखेको आभास भयो भने, म उसँग माफि पनि मागीहाल्छु। कोहि मेरो कुरा सुनेर खूशी हुन्छन्, कोहि अफ्ट्यारो मान्छन्, कसैले देखावटी गर्यो पनि भन्लान्। तर कमसेकम मेरो मनमा त्यो कुरा जमेर त बस्दैन।
कुशलले हामी छोडेर गयो। तर जाँदा-जादै उसले, मलाई जिन्दगीभरिको लागी एउटा कुरा सिकाएर गयो- "कसैलाई केहि कुरा भन्नु छ भने त्यो भनिहाल। के थाहा, त्यो कुरा सुन्नुपर्ने मान्छे नै पो भोलि होला कि नहोला।"